ထိုင်းနိုင်ငံ ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ ဒုတိယအသုတ် နေရပ်ပြန်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ မြဝတီမြို့ပြန်လည်ကြိုဆိုရေး စခန်းသို့ ထပ်မံရောက်ရှိ - Yangon Media Group
မြဝတီ ၊ ဇူလိုင် ၃
မိမိဆန္ဒအ လျောက် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ နေရပ်ပြန်လာကြသည့် ဒုတိယအသုတ် မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် ဇူလိုင် ၃ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်မှ ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက် ကျောက်လုံးကြီး လမ်းရှိ ပြန်လည်ကြိုဆိုရေးစခန်းသို့ ထပ်မံရောက်ရှိလာကြကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသားများအား ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးမှသံမှူးကြီး ဦးအောင်ကျော်သူရနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတာ့ခ်ခရိုင်မှ ဒုတိ ယ ခရိုင်(လဝက)မှူး မစ္စတာဆူဖာဝီတ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ဦးဆောင်၍ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီး မြဝတီခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတေဇာအောင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုလက်ခံခဲ့ကြသည်။
”အခုလိုမိမိသဘောဆန္ဒနဲ့ နေရပ်ပြန်လာကြတာက စတုတ္ထအကြိမ်ဖြစ်ပြီး ဇူလိုင် ၁ ရက်က ၁၅၇ ဦးနဲ့ အိမ်ထောင်စု ၃၉ စုက ပထမအသုတ်ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ ဒီနေ့တော့ လူဦးရေ ၁၁၉ ဦးနဲ့ အိမ်ထောင်စု ၃၁ စုက ဒုတိယအသုတ်ပေါ့။ သူ့တို့ကိုစားရေး၊ နေ ရေးအားလုံးအတွက် နေရာထိုင်ခင်းကအစလိုလေသေးမရှိဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။ သူတို့နေထိုင်မယ့်ဒေသကို သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အခမဲ့ပြန်ပို့ပေးမှာဖြစ်သလို အလုပ်အကိုင်ရရှိစေဖို့နဲ့ မှတ်ပုံတင်တွေ ရရှိစေဖို့ကိုလည်း အခမဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ”ဟု မြဝတီခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတေဇာအောင်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့် ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှ စောင်၊ ခြင်ထောင်၊ အဝတ်အထည်နှင့် အိုးခွက်ပန်းကန်များအပြင် အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင် လူတစ်ဦးရှိပါက ငွေကျပ်တစ်သိန်း၊ လူနှစ်ဦးရှိပါက ငွေကျပ်နှစ်သိန်း၊ လူသုံးဦးနှင့်အထက်ရှိသည့် အိမ်ထောင်စုအား ကျပ်သုံးသိန်းစီထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး တစ်လစာဆန်နှင့် ဆီများကိုပါ ထောက်ပံ့ပေးသွား မည်ဖြစ်သည်။
”ထိုင်းနိုင်ငံ’မယ်လာဝု’ ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ (၁၁) နှစ် ကြာနေထိုင်ခဲ့တယ်။ အခုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာစစ်ပွဲတွေမရှိတော့ဘူးကြားတယ်။လာတုန်းကတော့ စစ်ပွဲတွေဖြစ်လို့ စစ်ဘေးရှောင်ရင်း ပြေးလာခဲ့တာ ဒီမှာနေရင်း နှစ်တွေကြာခဲ့ရတယ်။ အခုကိုယ့်နေရပ်ဒေသကို ပြန်တော့မယ်”ဟု ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မှ ကရင်တိုင်းရင်းသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယနေ့ ဒုတိယအသုတ်ရောက်ရှိလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများမှာ အမျိုးသား ၅၄ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၆၅ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၁၁၉ ဦးမှ အိမ်ထောင်စု ၃၁ စုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အေဂျက်ဇ်ကို အရေးနိမ့်သည့် ပွဲအပြီး ရီးရဲလ်ဥက္ကဋ္ဌ ပီရက်စ်နှင့် ရာမို့စ်တို့ စကားများခဲ့ကြ၊ အ??
ဝင်ရိုးစွန်း ရေခဲပြင်များ ပျော်ဝင်လာမှုကြောင့် ဝင်ရိုးစွန်းရှိ နို့တိုက်သတ္တဝါများနေထိုင်??
လမ်းသားပြတ်ကျခဲ့သော မလွှဲတောင်လမ်းပိုင်း ဘေလီတံတားထိုးရန်ပြင်ဆင်၊ ဩဂုတ် ၁၆ ရက်တွင် ကားငယ်များဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်မည်